INkosana yasePersi: Baleka kwi-Ubisoft kunye neMidlalo yeKetchapp | I-Androidsis
INkosana yasePersi: Ukubaleka kukubuya komdlalo wokudlala. Sinokuphantse sitsho ukuba yayinguwo "loo" mdlalo obangele ukuba oopopayi abagqwesileyo bangabonwa kude kube lelo xesha. Oko kukuthi, yintoni enokubonakala ngathi iyinto eqhelekileyo oopopayi bomlinganiswa, xa iNkosana yasePersi yakhutshelwa iAmiga okanye iAtari 520ST, yayingaphambi nasemva kwelizwe lemidlalo yevidiyo.
Ngeli xesha Imidlalo yeKetchapp izisa ingxelo yeli bali ukubuyisa ezinye zeenkcukacha ebaluleke ngakumbi kunokuba ibiyiqonga ngokwenyani. Enye yezinto ezazibonakala ngayo kwiNkosana yokuqala yasePersi yayikukukwazi ukuba umlinganiswa wethu omkhulu abambelele emacaleni eendonga ukuze anyuke kwaye aqhubeke nohambo. Oku kunokubonakala ngathi kusisiyatha kukhona kumdlalo omtsha weKetchapp onxulunyaniswa ne-Ubisoft.
1 Ukugcina iNkosana yasePersi yoqobo
3 Ayifikeleli kuhlobo lokuqala
Ukugcina iNkosana yasePersi yoqobo
Kuninzi okwenzekileyo ukusukela oko iNkosana yokuqala yasePersi kunye nolandelelwano lwangoku igcwele i-3D, amanyathelo amaninzi kunye nenye indlela yokujongana nembali ejikeleze le saga. I-Ubisoft ifikelele kwisivumelwano sokukunika amalungelo okukhulula inguqu yayo kwenye yezona studio zinobuchule xa kufikwa kwimidlalo eqhelekileyo kunye neqonga.
Kwaye ngaphezulu okanye ngaphantsi, inxenye yesiseko seqonga leNkosana yasePersi ikhona. Abayi kuveliswa ngokuzenzekelayo amanqanaba, kodwa siza kuhamba sidlula emva komnye. Ke siyaqonda ukuba uyilo lwazo lwenziwe ngesandla. Ingcibi sithetha ukuba abayili bomdlalo bazamile ukubeka amaqonga kunye nemigibe ngendlela ekungekho lula kangako kwaye efuna umgudu womdlali ukuba ayidlulise. Inyaniso iyaxatyiswa.
Ke iMidlalo yeKetchapp ifake imiba ethile "yokwenyani" enxulumene neyokuqala. Ilizwi lomntu wethu ophambili xa esiwa, imigibe yakho ihlaba ukubona ophambili wethu ethe waphuka okanye ukuba kumaqonga athile sinokujinga ngokubambelela kwiminwe yethu. Ewe kunjalo, kuya kufuneka ukhawuleze, kuba baya kuthi baphule xa singangxami. Apha, ubuncinci, uKetchapp ubeke imizamo yakhe yokusizisela ingxelo ebekekileyo yeselula yeqonga leNkosana yasePersi.
Sihlala ke kunye incasa elungileyo emlonyeni wakho for iNkosana wasePersi: Escape Iza kwenziwa kwasekuqaleni kwizixhobo eziphathwayo. Ndingayithatha iCapcom kwaye ndenze okufanayo nee-Commandos zayo, i-Ghost'n goblins kunye nezinye izihloko ezikhutshwe, ngokukhawuleza okukhulu, kwiVenkile yokudlala. Ezinye zilungile, ewe, kodwa ngokuqinisekileyo ukuba ziye zaphuhliswa kwasekuqaleni ziya kulungeliswa ukuze zichukumise izikrini.
Ngokubhekisele kumdlalo, oomatshini banjengexesha elidlulileyoJonga kakuhle ukuba ungatsiba nini kwaye uqiniseke ukuba umlinganiswa wethu ophambili ufika ephila kwaye ekhaba ekupheleni kwenqanaba. Kuhlaziyo lwexesha elizayo kucingelwa ukuba siza kuba nakho ukufumana iimpahla, nangona okwangoku kuphela ukhetho kwaye akukho enye into esinokuyenza. Umyalezo "ozayo kungekudala" uyavela, ke ngethemba lokuba uyinyani kwaye ukongezwa komxholo.
Ayifikeleli kuhlobo lokuqala
Kwaye inyani, ingxelo yokuqala inika iwaka lijika koku Imidlalo yeKetchapp ihlaziya (ngemidlalo emikhulu enje). Inobunkunkqele bayo, kodwa loo manqanaba ngamaqonga awahlukeneyo kwiindawo eziphakamileyo ezahlukeneyo, avumela ukufumana ukuphuma kwelinye icala, walinika elalo. INkosana yasePersi: U-Escape unikezelwe kwifomathi ethe nkqo, yiyo loo nto ukubanakho ukuhlalutya indlela yethu yokubaleka inokuba ilahlekile.
INkosana yasePersi: Ukuphunyuka kunophuhliso olulungileyo lobuchwephesha, nangona kunjalo uphawu lwe-3D lushiya kancinci ukuba lunqweneleke. Ngebabeyisebenzisile kancinci, kuba kubonakala ngathi akanazo neempawu ebusweni bakhe.
INkosana yasePersi: Ukuphunyuka kuza njengenguqulo elungileyo yelo qonga lokuqala, nangona ingenasiseko sinye. Akukubi, kodwa kunokuba kuninzi kakhulu. Sishiyeke sinencasa elungileyo emlonyeni, kodwa ayisiyiyo loo ncasa uhleli ukhulelweyo kuyo unethemba lokuba nayo iya kuba semlonyeni wakho ngelinye ixesha.
INkosana yasePersi: Ukubaleka
Inayo kwiNkosana yokuqala yasePersi
Amanqanaba ayilwe ngesandla
Oh Thixo wam! ophambili kwi-3d imbi
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » INkosana yasePersi: Ukubaleka kukubuya komlando ovela ezandleni zeMidlalo yeKetchapp